Life of Pi (2012) – Gold Channel Movies
Video Sources 4599 Views Report Error
ကျွန်​တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Life of Pi ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးလားလို့​မေးရင် လူ​တော်​တော်များများက ​လှေတစ်စီး​ပေါ်က ​ကောင်​လေးတစ်​ယောက်နဲ့ ကျားတစ်​ကောင်ကားမလားလို့ ​တော်​တော်များများက​ဖြေတတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အ​ဖြေက​တော့မှန်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ​တော်​တော်များများက ဒီကားကိုသာမန်ရုပ်ရှင်တစ်ကားလိုပဲ မြင်​နေတတ်ကြပါတယ်။ ​လှေတစ်စီး​ပေါ်မှာ ကျားတစ်​ကောင်နဲ့ အတူရှိ​နေတဲ့ ​ကောင်​လေးတစ်​ယောက်က ဘယ်လို​မ​သေ​အောင်​နေထိုင်လဲဆိုတာကို ပြတယ်​ပေါ့ ဒီလိုပဲ​အများစုကမြင်ကြတာပါ။ တကယ်​တော့ ဒီကားက အဲ့ဒီထက်ကို အများကြီးပိုပါတယ်။
Life of Pi ဇာတ်ကားကို​တော့ Life of Pi ဆိုတဲ့နာမည်ပဲ​​ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်အသွင်​ပြောင်းထားတာပါ။ စာအုပ်ကို​တော့ စပိန်မှာ​မွေးတဲ့ က​နေဒါစာ​ရေးဆရာ Yann Martel က​​ရေးပြီး​တော့ 2001 ခုနှစ်မှာထုတ်​​ဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Yann Martel က ဒီစာအုပ်နဲ့ပဲ Booker Prize ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကို​တော့ ထိုင်ဝမ် ဒါရိုက်တာ Ang Lee ကပဲရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Ang Lee က Hulk(2003) Brokeback Mountain(2005) Gemini Man(2019) အစရှိတဲ့ရုပ်ရှင်​တွေကိုလဲ ရိုက်ကူးခဲ့ပါ​သေးတယ်။ Life of Pi ဇာတ်ကားနဲ့လဲ Ang Lee ကအ​ကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုကို 2012 ခုနှစ်မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ Pi ​နေရာမှာ​တော့ ဟိုတစ်​လောကပဲ ကင်ဆာ​ရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားတဲ့ Irrfan Khan က သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ Irrfan Khan ကိုပဲ တစ်​လျောက်လုံး​တွေ့​နေရမှာ​တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Irrfan Khan က သူ့ရဲ့ဘဝဇာတ်​ကြောင်းကို ပြန်​ပြောပြ​နေတဲ့ အသက်အရွယ်ရလာပြီဖြစ်တဲ့ Pi ​နေရာက​နေ သရုပ်​ဆောင်ထားတာမို့လို့ပါ။ အများဆုံး​တွေ့ရမှာက​တော့ 16 နှစ်သား Pi အ​​နေနဲ့ သရုပ်​​ဆောင်ထားတဲ့ Suraj Sharma ကိုပဲ​တွေ့ကြရမှာပါ။
ဇာတ်လမ်း​လေးက​တော့ တိရိစ္ဆာန်ရုံဖွင့်ထားတဲ့လူတစ်​ယောက်ရှိတယ်။ သူ့မှာက သားနှစ်​ယောက်လဲရှိတယ်။ အဲ့ဒီသားနှစ်​ယောက်ထဲက တစ်​ယောက်က​တော့ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကသရုပ်​ဆောင်ဖြစ်လာမဲ့ Pi ​ပေါ့။ တစ်​နေ့ကျ​တော့ သူတို့မိသားစု ဒီက​နေစွန့်ခွာပြီး တခြားတစ်​နေရာကို​ပြောင်းဖို့ အ​ကြောင်းဖန်လာပါ​ရော။ အဲ့ဒီအတွက် တိရိစ္ဆာန်ရုံကို​လဲ ​ရောင်းရ​တော့တာ​ပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့သူတို့​ပြောင်း​ရွှေ့မဲ့ က​နေဒါနိုင်ငံကို ဂျပန်သင်္ဘောတစ်စီးနဲ့ ​ပြောင်းကြပါ​ရော။ သူတို့ပဲလားဆို​တော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တိရိစ္ဆာန်ရုံက တိရိစ္ဆာန်​တွေကိုပါ တစ်ခြားသူလက်ထဲကို​လွှဲ​ပြောင်း​ပေးဖို့ သင်္ဘောဝမ်းထဲမှာ ထည့်လာကြပါတယ်။ တစ်ရက်မုန်တိုင်းတိုက်​တော့ သူတို့စီးလာတဲ့ သင်္ဘောကလဲ မြုပ်ပါ​လေ​ရော။ အဲ့ဒီထဲမှာ အကယ်​လှေ​ပေါ်ပါလာပြီး လွတ်သွားတာဆိုလို့ Pi တစ်​ယောက်ပဲရှိတယ်။ ​နောက်​တော့ Pi အပြင် မြင်းကျားတစ်​ကောင် ​မျောက်တစ်​ကောင် ​ခွေးအတစ်​ကောင်နဲ့ ဇာတ်လိုက်​ကျော် Richard Parker လို့​ခေါ်တဲ့ ​ကျားပါ ပါလာပါ​ရော။
ဇာတ်လမ်းက အခုမှတကယ်စတာ။ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး အ​ကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ Pi နဲ့ Richard Parker တို့ နှစ်​ယောက်ပဲ ကျန်ပါ​တော့တယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကျားဆိုတာလဲ ယုံရတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်တာ။ ပြီး​​တော့ ​ရောက်​နေတဲ့​နေရာကလဲ ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင် ပင်လယ်ပြင်မှာ။ ဘယ်နရက်ကြာမယ်မှန်းလဲမသိ။ ဘယ်​နေ့အထိအသက်ရှင်မယ်မှန်းမသိတဲ့အ​ခြေအ​​နေမှာ Pi တစ်​ယောက် Richard Parker နဲ့ နှစ်ပါးသွားရပါ​တော့တယ်။
ကြာလာ​တော့လဲ Pi နဲ့ Richard Parker တို့က စိမ်း​တော့လဲမစိမ်းကြ​တော့ပါဘူး။ Richard Parker ကလဲ Pi ကိုစားမဲ့ပုံလဲ မ​ပေါ်ဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ လူနဲ့ ကျားဆို​တော့လဲ ​Pi တစ်​ယောက် ညအိပ်တာ​တောင် စိတ်မချလို့ အစားအသာက်​တွေထည့်ထားတဲ့ အထုပ်ကို ​လှေနဲ့တွဲချည် ​ဖောင်လိုလုပ်ပြီး ​လှေနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက​နေ အိပ်ရရှာတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းက ဒိုင်ယာ​လော့​တွေက ​ဝေဖန်သူ​တွေကြားထဲမှာလဲ ​တော်​တော်​လေးကိုပွက်​လောရိုက်ခဲ့တာပါ။ ဘာသာ​ရေးအ​ကြောင်း​တွေပွထ​နေ​​အောင် အစပိုင်းမှာထည့်ထားတာလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်။ ရထားတဲ့ ဆု​တွေကလဲ မနည်းမ​နောဆို​တော့ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အလှတရား​တွေ ​ရေပြာပြာ​အောက်က အ​ရောင်စုံ​​နေတဲ့ ငါး​​လေး​တွေ ညဘက်​ရှင်းလင်း​နေတဲ့ ​ကောင်း​ကင်​ပေါ်က ကြယ်​လေး​တွေနဲ့ကြည့်တဲ့လူကို ​တော်​တော်​လေးဖမ်းစားနိုင်ပါတယ်။
သင်​ရော ကျားတစ်​ကောင်နဲ့ ဒီလိုအ​ခြေအ​​နေမှာရှိမယ်ဆိုရင် အိမ်ပြန်​ရောက်နိုင်မယ်ထင်လား။ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်​နေတယ်ဆို​​ပေမဲ့ သက်ရှိဆိုတဲ့အတိုင်း နှလုံးသား​တော့လဲရှိကြတာပဲ။ ကူကယ်ရာမဲ့​နေတဲ့အချိန်မှာ အနားမှာရှိတဲ့အရာကို ​မျှော်လင့်ချက်အ​နေနဲ့ ဖမ်းဆုပ်တတ်တာက​တော့ သဘာဝပါပဲ။ Richard Parker လဲ Pi ကို မသတ်စားတာက ဒီလိုပဲဖြစ်​ကောင်းဖြစ်မှာပါ။ ​သေချာတာက​တော့ စာ​ရေးသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်မှာပါ။ Richard Parker ကို ကြည့်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်တဲ့ မျက်လုံး​တွေ​ကြောင့်လဲ ဒီဇာတ်ကားက ပိုပြီးအသက်ဝင်သွားခဲ့တာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ကျွန်​တော်ခံစားလိုက်ရတဲ့ အရာ​တွေက​တော့ အများကြီးကျန်ပါ​သေးတယ် ​ပြောလိုက်ရင် ကြည့်တဲ့လူ​တွေ ဟာတာတာဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ချန်ခဲ့လိုက်ပါပြီ။ ကြည့်ပြီးလို့ သ​ဘောကျတာ​လေး​တွေ ခံစားမိတာ​လေး​တွေရှိရင် Comment မှာ ဝင်​ရေးသွား​ပေးကြပါ။
Translated by JoJoVa
Size – 2GB / 1GB / 440MB
Run Time –2Hr7mins
IMDb Rating 7.9 572,199 votes
TMDb Rating 7.4 10,250 votes
Download Mega FHD ??????2gb
Download GDrive FHD ??????2gb
Download Mediafire FHD ??????2gb